Tamarta qoraxda iyo ilaha kale ee tamarta la cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Awoodda dabaysha, tamarta Haydarooliga, Tamarta Qoraxda Photovoltaic
Dhammaan tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda, iyo sidoo kale cilladahooda, laakiin kawaran hadaan isbarbar dhigno tamarta cadceeda kuwa kale ee dib loo cusboonaysiin karo?
Tusaale ahaan, tamarta korontada iyo korontada dabaysha waxaa kujira farqi weyn marka loo eego awooda cadceedda.
Qaar badan oo ka mid ah kala duwanaanshahan waxaa lagu arki karaa si guud wadamo badan oo iyaga lagu rakibo, laakiin haddii aan eegno dhanka Spain, farqigaas ayaa xitaa ka sii weyn.
1 tamarta Haydarooliga
3 Tamarta qoraxda
In yar oo aan ka hadlo tamar kasta oo la sheegay, waxaan dhihi karaa taas markay tahay tamarta Haydarooliga adoo helaya kaydad hawleed oo ku filan soo saar tamartaan waxaan gaari karnaa wax aan ka yareyn tirada 20.000 MW.
Laakiin, had iyo jeer waxa jira laakiin, waa sidaan soo sheegay, ereyga sixirka ah halkan waa "hawlgal" maxaa yeelay dhammaan barkadaha ma shaqeyn karaan Aniguna ulama jeedo dayactirka ama dhibaatooyinka hawlgalka (oo waliba halkaas ka jiri doona) laakiin waxaan u jeedaa biyaha, kheyraadka dabiiciga ah iyo kan yar ee loo baahan yahay in lagu soo saaro tamartaas.
Iyada oo dalagyadu ay u dhow yihiin kaydka biyaha u qaata waraabinta, baahiyaha aasaasiga ah iyo abaaraha caadiga ka ah waddankeenna ama ugu yaraan qayb ahaan, waxay ka dhigayaan kaydad badan oo aan awoodin inay bilaabaan.
Tan macnaheedu waa iyada oo leh tamartaan lama tirin karo si joogto ah Sababtoo ah xaqiiqada ah in xaaladaha roobka iyo keydinta biyaha ee loo baahan yahay in la sameeyo biyo-dhaca iyo soo saarida tamarta lagama maarmaanka ah ay tahay in la buuxiyo.
Dhanka kale waxaan leenahay tamarta tamarta, haysashada awood ballaaran oo kaabayaasha tamarta aan awoodno soo saar qiyaastii 40% wadarta lagama maarmaan, taas oo u dhigmi lahayd 23.000MW, oo sidaas darteed awood u siin kara qayb ballaaran oo ka mid ah dhulka Isbaanishka.
Haddana halkan waa eray kale oo sixir ah oo aad maanka ku hayso, "dabayl", runtii, gudaha maalin dabayl la'aan waxba lama soo saaro oo aan ku haysanno kaliya marawaxadaha dabaysha oo aan waxba qaban.
Si kastaba ha noqotee, oo anigu mar dambe kuma sii dheereynayo cusboonaysiinta hore, waxaan haysannaa tamarta qoraxda.
Macno malahan meesha dhirta wax soosaarkaagu ku yaalliin, meel kasta oo juqraafi ahaan Spain ah tamar ayaa la soo saari doonaa maalin kasta sanadka.
Spain waa wadanka cadceedda waana inaan si uun uga faa'iideysanaa taas.
Halkan waxaad ku sheegi doontaa, miyaanay jirin eray sixir ah oo ku jira tamarta qoraxda sida "daruuro"?
Hubaal haa, laakiin In kasta oo ay daruuro tahay, dhacdooyinka iftiinka ayaa sii socda Dhirta qoraxda ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara tamartaas, sida iska cad waxay soo saari doonaan awood ka yar tan maalin qorrax leh, laakiin way sameeyaan.
Iyo "habeen"? xaaladdan waxaan dhihi karnaa haddii ay run tahay in tamarta qorraxda aan wax badan laga faa'iideysan habeenkii, waxaan ula jeedaa in aan la soo saarin, laakiin sidoo kale waa run in inta lagu jiro muddadan baahida tamarta waa mid aad u hooseysa.
Haddii aad la yaabban tahay sababta tamarta qorraxda aan loo horumarin si ka sii horreysa marka loo eego tamarta dabaysha, taas ayaan kuu sheegi doonaa kharashka.
Dhamaanteen waxaan eegeynaa jeebadeena haddii aan kaliya diirada saareyna taas, qiimaha mid iyo tan kale ee tamarta ayaa aad u kala duwan.
Waxaa loo dagaallamay in la yareeyo iyaga waxayna hoos udhaceen sanadihii udambeeyay marka laga hadlayo tamarta qoraxda laakiin wali qiimuhu wuu ka badanyahay kan tamarta dabaysha
Waxay u muuqataa taas waa faa iido badan in la hirgaliyo tamarta dabaysha marka loo eego tamarta qorraxda inkasta oo la arkay faa iidada weyn ee hore loo soo sheegay in maalmo badan tamarta dabayshu soo saari doonin wax dabayl la’aan ah halka tamarta qoraxda ay si joogto ah u tahay wax soo saarkeeda.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan siyaasada ugu galaynaa qaab aad u xeel dheer, ma doonayo inaan ku galo ugu badnaan mowduucan sababo kala duwan awgood markaa kaliya waxaan ku siinayaa isug garaac yar
Ogaanshaha Spain, haddii qiimaha tamarta qorraxda ay ka hooseyso tan dabaysha, Waxay ila tahay aniga in awoodda dabayshu ay sii wadi doonto inay guuleysato Sababtoo ah fikradda aad u haysato soo-saarista tamarta ee joogtada ah waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee tamarta qoraxda mararka qaarkood u fadhiistaan.
Tusaalaha cad ayaa leh Murcia oo curyaan noqotay muddo sannado ah inkasta oo uu leeyahay meel mudnaan u leh rakibidda tamartaas.
Waxay umuuqataa in waxwalba ay horay usocdaan xasiloonidiina ay gunta galisay, laakiin carqaladaha meesha ladhigay taas waa wacdaro.
Waddan ay, si kasta oo caddaalad darro u muuqato, Ma qirayo rabitaan ahaan u adeegso tamartaan "is-cunid" iyo inay awoodaan inay yareeyaan lambarada si aad u cabsi gelinaya qoysas badan oo qaansheegta ah.
Illaa iyo hadda waxaan la imid milicsigeygan ugu dambeeya oo kaliya in aan idhaahdo inkasta oo ay umuuqato inaan kaliya jeclahay qorraxda (haddii ay lasocoto xaflad aad ufiican) taasi sidaas maahan, waxaan kuqarxayaa dhammaan iyo tamarta la cusboonaysiin karo oo dhan, qaarkood way ka fiican yihiin kuwa kale, in kastoo ay kuxirantahay halka ay ku yaaliin waana inaad haysataa dhamaan xoogyadan si aad qofkasta awood ugu siiso.
Sababtoo ah mustaqbalku wuxuu ku jiraa dib-u-cusboonaysiin
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Tamarta qoraxda iyo ilaha kale ee tamarta la cusboonaysiin karo
Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay, dabcan, aad ayaan ugu waafaqsanahay wixii faallooyinka laga bixiyay.
Dhamaanteen waan ognahay arinta siyaasadeed ... inkasta oo goor dambe, lama garanayo sababta, ugama muuqato sanduuqa doorashada. Sikastaba, waxaan wali nahay adhi wixii ay adhijirradu dhahaan
Aad baad u mahadsantahay Carlos, waan ku faraxsanahay inaad ka heshay.
Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in ugu dambayn la cusboonaysiin karo iyo ficillada kale ee lagu horumarinayo tayada nolosheena ay meel fog uga hadheen.
Adhijirradu, sidaad u sheegtay, aad uguguma fiicna shaqadooda Spainna wey ogtahay in badan.
Isbarbar dhigga awoodda dabaysha marka la eego soo saarista wax badan ama ka yar maahan wax aad u adag. Waa wax xiiso leh in la bixiyo isbarbardhigga tirooyinka qaarkood, sida celceliska cunsurka mid iyo midka kale ee Isbaanishka. Ka sokow, waxaa jira arrimo aan inta badan lagu xisaabtamin markii la isbarbar dhigo, sida dhulka ay qabsadaan iyo isticmaalka la jaan qaadaya rakibidda.
Waxaan kaliya diirada saaray isbarbar dhigga soosaarka korontada maxaa yeelay waa waxa aan runtii "arki karno" haddii ay guriga noogu timaado isticmaalka tamarta.
Dabcan waxaan isbarbar dhigi karnaa tamartaas iyo inta hartay iyo qodobo kale oo aan tixgelin siinno, sida dhulka, kharashaadka waxsoosaarka, saameynta ay keeneen, faa iidooyinka iyo qasaaraha iyo muddada dheer iwm.
Dhibaatada, inaad kaliya tahay inaad diirada saarto mid maxaa yeelay hadaan wax walba kahadalno, waxay na siineysaa inaan qoro buug.
Salaan Mario, waad ku mahadsan tahay faalladaada.
Noocee gaadiid ah ayaa ugu waxtar badan EU?
Spain waxay ka mid tahay wadamada EU ee yareeya qiiqa ugu yar